साउथ इन्डियन सुपरस्टार रामचरणकाे सम्पती कति छ ? आलिशान घर, विलासी गाडी र एयरलाइन्स कम्पनीका मालिक ! - News 88 Post
रामचरण तेजाको कुल आम्दानी
साउथ इन्डियन सुपरस्टार रामचरण आफ्नो उत्कृष्ट अभिनयका साथै आफ्नो विलासी जीवनशैलीका लागि परिचित छन्। रामचरण तेजाको दक्षिणमा मात्रै नभई देशभरि ठूलो फ्यान फलोइङ छ। लिजेण्ड सुपरस्टार चिरञ्जीवीका छोरा राम चरण साउथ फिल्मबाट सिने जगतमा ठूलो नाम कमाइसकेका धनी कलाकारमध्ये एक हुन् ।
रामचरणले फिल्मबाट मात्रै कमाइ गर्दैनन् । रामचरणको आफ्नै एयरलाइन कम्पनी पनि छ । टर्बो मेघा एयरवेज प्राइभेट लिमिटेड हैदराबादमा आधारित एक क्षेत्रीय एयरलाइन हो । YG ले ग्राउन्ड ह्यान्डलिंग सेवाहरूमा प्रमुख एयरलाइन्सहरूलाई मद्दत गर्दछ। रामचरण पोलो क्लबका मालिक पनि हुन्, अभिनेताको घोडाप्रतिको लगाव सानैदेखि छ ।
मिडिया रिपोर्टका अनुसार रामचरणको मासिक आम्दानी एक महिनामा चार करोडभन्दा बढी हुन्छ । रामचरण कार संग्रहमा धेरै लक्जरी गाडीहरू छन्। राम चरणसँग Aston Martin, Rolls Royce Phantom, Mercedes GL 350 जस्ता धेरै ठूला गाडी छन्।
साउथ सुपरस्टार रामचरण हाउसको हैदरावादको जुबली हिल्समा २५ हजार स्क्वायर फिटको आलिशान घर छ। जसको मूल्य ३० करोड रहेको छ । रामचरणको हैदराबादको घर एउटा दरबार जस्तै छ, यसमा स्विमिङ पुल, जिम र टेनिस कोर्ट सबै सुविधाहरू छन्।
साथै, रामचरणको मुम्बईमा एक आलिशान पेन्ट हाउस पनि छ। रामचरण मुम्बईमा सलमान खानका छिमेकी हुन्। रामचरणले धेरै प्रकारका ब्रान्डहरूमा पनि लगानी गरेका छन् जसबाट उनले रोयल्टी पाउँछन्।
२ मिनेट समय निकालेर पढ्नुस्, विद्या कसम जीन्दगी बदलिनेछ !
May 16, 2021 May 16, 2021 N88
पूर्व प्रेमी/प्रेमीकालाई भुल्ने १० तरिकाहरू !
December 8, 2021 N88